Qarax ka dhacay bannaanka masaajid ay Shiicadu leedahay - BBC Somali
Qarax ayaa waxa uu ka dhacay banaanka hore ee masaajid ay shiicada leedahay oo ku yaalla magaalada Dammam ee dalka Sacuudiga.
Ilaa hadda ma cada waxa dhacay, laakiin waxa uu u muuqdaa weerar ismiidaamin ah.
Lamana oga saameynta uu geystay qaraxaasi.
Balse waxa ay arrintan walaac ballaaran ku abuuraysaa saraakiisha Sacuudiga, dhacdadan ayaa imaanaysa toddobaad kaddib markii weerar ismiidaamin ah lagu qaaday masaajid ku yaalla tuula ku teedsan gobalkaasi, halkaa oo ay ku dhinteen in kabadan 20 qof.
Fiidiyow la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya qiic madow oo cirka isku shareeray oo ka soo baxaya meel la dhigo baabuurta, oo ah bannaanka hore ee masaajidka Imam Xuseen ee magaalada Dammam.
Magaaladaasi ayaa ah xudunta ganacsiga gobalka waqooyiga ku yaalla, oo ah halka ay ku badan yihiin Shiicada laga tirada badan yahay.
Sidaan oo kale todobaad ka hor, ayaa dad waxa ay ku dhinteen masaajid kale oo Shiicada ay leeyihiin oo ku yaalla gobalkaasi, kaas oo uu fuliyay qof isa soo miidaamiyay xilligii salaada Jimacaha.
Waxaana masuuliyada weerarkaasi sheegtay kooxda la magac baxday Khilaafada Islaamka.
Weeraradan aan caadiga aheyn ayaa waxa ay miiska soo saarayaan arrimaha haysta dadka Shiicada ah oo horay la isaga indha tiray, waana taa sababta Sacuudiga uu ugu baaqayo in la midoobo oo laga soo horjeesto dadka dhibaatadan geysanaya.
Shiicadana waxa ay doonayaan in la joojiyo dadka fidnada iyo kala qaybinta wado.